को हुन् 'द ह्वाइट टाइगर' बाट एकाएक चर्चामा आएका आदर्श? :: Setopati
को हुन् 'द ह्वाइट टाइगर' बाट एकाएक चर्चामा आएका आदर्श?
अभिनेता आदर्श गौरव
यतिबेला नेटफ्लिक्स फिल्म ‘द ह्वाइट टाइगर’ चर्चामा छ। नेटफ्लिक्समा यो फिल्म सबभन्दा लोकप्रिय बनेको छ। ‘द ह्वाइट टाइगर’ जनवरी २२ मा सार्वजनिक भएको हो।
रमिन बहरानीको निर्देशनमा तयार भएको यो फिल्म लेखक अरविन्द अडिगाको ‘द ह्वाइट टाइगर’ उपन्यासमा आधारित छ। ‘म्यान बुकर प्राइज’ पुरस्कार पाएको यो उपन्यास पहिलो पटक सन् २००८ मा प्रकाशन भएको थियो।
उपन्यास र फिल्ममा बलराम हलवाई मुख्य पात्र छन्। जो साधारण सवारी चालकबाट सफल व्यापारी बन्छन्। उनी कसरी सफल हुन्छन्, आफ्नो स्थान बढाउन के-के गर्छन् भन्ने घटनाक्रममा उपन्यास बुनिएको छ। फिल्ममा पनि उपन्यासमा जस्तै घटनाक्रम देखाइएको छ।
‘द ह्वाइट टाइगर’को चर्चासँगै यसका मुख्य अभिनेता आदर्श गौरवको चर्चा चुलिएको छ। उनी फिल्ममा बलराम हलवाईको भूमिकामा छन्।
फिल्ममा अभिनेता राजकुमार राव र अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको पनि अभिनय छ। फिल्ममा यी दुई चर्चित हस्तीहरू भए पनि यतिबेला आदर्शको चर्चा भइरहेको छ। उनको चर्चा फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएदेखि नै सुरू भएको थियो। ‘द ह्वाइट टाइगर’ उनको अमेरिकी डेब्यू फिल्म हो। फिल्म भने हिन्दी भाषामा छ।
बलराम हलवाइको भूमिकामा आदर्श गौरव
को हुन् त आदर्श गौरव? कसरी ‘द ह्वाइट टाइगर’को मुख्य भूमिका पाए?
२६ वर्षीय आदर्श गौरवले किशोर अवस्थामै बलिउड प्रवेश गरेका थिए। त्यतिबेला उनी १४ वर्षका थिए।शाहरूख खानको सन् २०१० मा सार्वजनिक ‘माइ नेम इज खान’मा उनी साना शाहरूख बनेका थिए। उनले सुरूमा शाहरुख खानका छोराको भूमिकाका लागि अडिसन दिए। तर त्यतिबेला उनले सो भूमिका खेल्न पाएनन्।
अडिसनबाट रिजेक्ट भएको ६ महिनापछि उनलाई कास्टिङ क्रुबाट फोन आयो। फिल्मका लागि साना शाहरूख चाहिएको थियो। त्यसैको अडिसन पनि भइरहेको थियो।
साना शाहरूखका लागि अडिसन दिँदा भने उनले सो भूमिका खेल्ने अवसर पाए। त्यस फिल्म नै उनको बलिउड डेब्यू फिल्म बन्यो।
‘माइ नेम इज खान’ पछि उनले सोचेजस्तो भूमिका पाइरहेका थिएनन्। त्यसको सात वर्षपछि मात्रै ‘रूख’ नामक अर्को फिल्म सन् २०१७ मा सार्वजनिक भयो। फिल्ममा उनले मनोज बाजपेयीका छोराका भूमिका निर्वाह गरे।
लामो समयपछि ठूलो पर्दामा देखिएका आदर्शले त्यसबिचको समयमा विज्ञापन तथा छोटो फिल्ममा काम गरिरहेका थिए।
डेब्यू निर्देशक अतानु मुखर्जी निर्देशित फिल्म ‘रूख’ पछि सन् २०१७ मै आदर्शको अर्को फिल्म ‘मम’ रिलिज भयो। त्यसपछि आदर्शले टिभी श्रृङ्खला ‘डाइ ट्राइङ’, वेब सिरिज ‘लिला’, ‘होस्टल डेज’ लगायत डिजिटल सिरिजमा अभिनय गरे।
आफ्नो प्रतिभा र रूचिलाई बढावा दिँदै आदर्श ‘द ह्वाइट टाइगर’ अर्थात् सेतो बाघ बनेर अमेरिकी फिल्म उद्योगमा प्रवेश गरेका छन्। यो फिल्म उनको करिअरको ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेको छ। ‘द ह्वाइट टाइगर’ उनको करिअरको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट हो।
फिल्ममा आदर्शको अभिनयको तारिफ दर्शकले मात्र होइनन्, प्रियंका चोपडा र राजकुमारले समेत तारिफ गरेका छन्।
भारतको जम्सेदपुरमा जन्मे-हुर्केका आदर्शको रूचि अभिनयमाभन्दा संगीतमा थियो। उनले विभिन्न गुरुबाट झन्डै ९ वर्ष शास्त्रीय संगीत सिके। कलेजमा पुगेर उनले आफ्नै ब्यान्ड पनि बनाए- ओक आइल्यान्ड। जसमा उनी लिड भोकलिस्ट थिए।
कलेज सकेपछि उनले आफ्नो कलाकारितामा आफ्नो करिअर अगाडि बढाउने सोच र मुम्बई पुगे। त्यहाँ उनी 'द ड्रामा स्कुल' भर्ना भए। अभिनयसँगै आदर्शले आफ्नो संगीत यात्रालाई पनि निरन्तरता दिए।
आदर्श अहिले बलिउड अभिनेता मात्र होइनन्, गायक-गीतकार समेत हुन्।
अहिले आदर्श जुन स्थानमा पुगेका छन्, उनी यसको हकदार छन्। दस वर्षको निरन्तर मिहिनेत र संघर्षले आदर्श ‘सेतो बाघ’ बनेका छन्।
फिल्म 'द ह्वाइट टाइगर'को दृश्य
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १५, २०७७, ०४:०१:००